संवादका हत्यारा – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsसंवादका हत्यारा
September 28, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, निबन्ध 0
दार्जीलिङबाट भइसकेको दुइवटा उद्देश्यहीन आन्दोलन पनि आखिर किनारा परेकाहरूको सार्वजनिन्‌ पीढा नै त हो। केन्द्रसितको लडाईँमा हिँडिएको किनाराको बाटो पनि केन्द्रतिर नै फर्किएको हुन्छ। अहिलेलाई भारतीय नेपालीहरूको सार्वजनिन पीड़ा भनेको‘जातीय उन्मुक्ति’- मात्र होइन। किन भने कुनै पनि जातिको उन्मुक्ति सम्भव छैन। जातीय मुक्तिको अवधारणाले हामीलाई तान्छ किन भने यो सार्वजनिन पीड़ा हो। त्यो सार्वजनिन पीड़ालाई कहीँ लगेर मिल्काउन मिल्छ? अथवा त्यो सामुहिक दुःखलाई त्यतिकै छोड़ेर कुनै पनि कवि भाग्न मिल्छ? किन नेपालका कविहरूको झुण्ड सडकमा ओर्लिएका? किन दार्जीलिङमा मनप्रसाद सुब्बाहरू किनारामा पारिएको गाथा गाइरहेका हुन्‌? किन प्यालेस्टानी रफिफ जियादाहरू सेड्‌स अफ एङ्गर लेखिरहेका? किन कर्नाटकमा कलबुर्गीहरू गोली खाइरहेका?
हामी भारतीय नेपाली केही युवा कविहरू ‘संवाद’-को समाजशास्त्रलाई फेरि उल्टाएर हेरौँ कि भनिरहेका छौँ। किन भने हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ, हामीले इतिहाससित गरेको संवादमा कहॉंकहॉं सत्य छुट्यो त? भारतीय नेपालीहरूको इतिहासमा संवादहीनता किन जमेर बस्यो? त्यो साहित्यमा किन छ्‌याङ्‌गै देखियो? मलाई लाग्छ, चोट नै नलागी दुख्नेहरूको इतिहासले सार्वजनिन‘दर्द-’को टुप्पो भेट्‌न सक्दैन। कवि अलग्गै कलारतिमा मात्र बसिदिने हो भने समाजसित कसले संवाद गर्ने? के भन्ने पाठकलाई? के दिने? कसरी दिने? हाम्रा दैनन्दिनीको आकासमा विज्ञापन, मल्टिकम्पनी र उत्पादन केन्द्रहरू जूनतारा भएर बस्छ।
घामपानी भएर बस्छ। जतै फर्किए पनि मलाई चाहिएको वस्तु ठीक्क मैले सोंचे झैं नै पाइन्छ। तर जुन यहॉं औपनिवेशिक हैकम छ, सत्ताको चलखेल छ, कम्पनीहरूको मनोपोली छ, त्यसले गरेको जुन सँस्कृति र मूल्यमाथिको दोहन छ, यो अन्तरविरोध, द्वन्द्वबारे कसले संवाद गर्ने? हो, बेलाबेला हर्बर्ट रिडले भनेजस्तो ‘मान्छेसित गल्ती र अपूर्णता सधैँ जोडिएको हुन्छ’ भन्ने विचलनलाई पनि स्वाकीरेर बसिदिनै सकिन्छ। तर सधैभर चुपचाप बस्ने समय हुँदैन। त्यो गल्ती र अपूर्णताको खोज नै प्रकृति हो। यो जीवित यथार्थ हो। यो गतिमान छ। यसलाई पन्साएर कोही बस्न सक्छन्‌?
यतिखेर राजनीति जो पोखरीभर जमेर बसेको हिलोपानी छ र त्यहॉंभित्र छौं हामी केही भुराभुरी माछा। जहॉं आम संवादले राजनैतिक स्वार्थले लिपिएको भित्ता चर्काउन सक्दैन। यस्तोमा जुन कविता लेखिरहेका छौं, यसले गर्ने संवाद कसको निम्ति हो त? म अहिले डा. बासीले औंल्याएको दुःखतिर फर्किएको छु। अथवा म एउटा सुखलाई सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छु। एउटा सपनालाई पछ्‌याउन खोेजिरहेको छु। यो मेरो कुनै अपराध होइन। यस्तोमा जुन संसारभरि आआफ्नै अस्तित्वको दाबीमा आम स्वैरकल्पना छ, यसलाई घर लिप्दै बस्ने बढ़ी आमाभित्र कसरी खोतल्नु? जो कवितादेखि हज्जारवर्ष पर छन्‌।
आमा र कविताबिच हुने संवाद कसले मारिरहेको छ? फेड्रिक नित्सेले ईश्वरलाई मारेर जुन मनुष्यकृत संसार व्यवस्थाको कुरा गरे, रोला बार्थको लेखकीय सत्ता सिर्जना बाहिर पर्ने र सिर्जनादेखि टाड़ा कुनै जङ्गलमा पुगेर सिर्जनपछि आखिरमा लेखकले आत्महत्या गर्ने द्वीअर्थि इल्युजनले मेरो घॉंटी निमोठिरहेको छ। शङ्‌कर लामिछानेले जस्तो ‘म आजको समयको मान्छे होइन’ भनेर म आजकै समाजबाट कतिदिन टाड़ा बस्नुसक्छु? किन भने मैले सास फेरिरहेको हावा आजकै छ। मैले टेकिहेको भुइँ आजकै छ। मैले भोगिरहेको समस्या आज कै छ। म कुनै प्राचीन हावालाई मिथक बनाएर सास फेरिरहन सक्दिन। यतिखेर म धेरै कुरा भन्न खोजिरहेको छु,तर मेरो कुरा तपाईँसम्म पुग्दैपुग्दैन। भन्नुहोस्‌ त, कसले गर्‍यो संवादको हत्या? को हुन संवादका हत्यारा?